Iimuvi zokubukela ngaphambi kokuya eRoma ukuze wazi isixeko | Iindaba Zokuhamba
ULuis Martinez | 26/04/2021 10:19 | Ukuhlaziywa ukuba 26/04/2021 10:23 | isiko, ngokubanzi, Italia
Ukuba uceba uhambo lwakho oluya e-Itali, phakathi Zonke izixeko onokuzityelela kweli lizwe, IRoma mhlawumbi kukumiswa okunyanzelekileyo kwindlela yakho. Ukuba ufuna ukufumanisa iimovie ukuze uzibone ngaphambi kokuya eRoma, into yokuqala ekufuneka sikuxelele yona yile IsiXeko esingunaPhakade uthathe inxaxheba enkulu kwihlabathi lemiboniso bhanyabhanya. Kwaye oku kumakhasethi kusetiwe zombini kwimvelaphi nakulungelelwaniso lwangoku.
Ngokumalunga neyokuqala, kuye kwakho uhlobo lonke lwefilimu olubuyisela iRoma yamandulo: iplum. Kwaye, njengowesibini, ukusuka I-neorealism yase-Italiya kumzi mveliso we hollywood ukhethe inkunzi ye Italia njengolungiselelo lweefilimu zakhe ezininzi. Kodwa, ngaphandle kokuqhubela phambili, siza kukubonisa ezinye zeemovie ukuba ubukele ngaphambi kokuba uye eRoma.
1 Iimuvi zokubukela ngaphambi kokuya eRoma: ukusuka kwipeplum ukuya kwi-cinema yanamhlanje
1.2 'Iiholide eRoma'
1.3 'La dolce vita', enye iklasikhi phakathi kweemovie ozibonayo ngaphambi kokuya eRoma
1.4 'Molo Dayari'
1.5 'Roma, vula isixeko'
1.9 'I-Accatone', umzobo weedolophu
Iimuvi zokubukela ngaphambi kokuya eRoma: ukusuka kwipeplum ukuya kwi-cinema yanamhlanje
Njengoko besikuxelele, iifilimu ekufuneka uzibonile ngaphambi kokuba uye eRoma zithatha isixeko njengoseto. Kodwa, ukongeza, uninzi lwazo luyayenza omnye umlinganiswa inefuthe kwaye ichaze nobomi babalinganiswa abaphambili. Siza kubona ezinye zeemovie.
Ipowusta ka 'Ben-Hur'
Ukuba besithetha nge-cinematographic genre yepeplum, le blockbuster yaseHollywood yenye yeesampulu zayo. Yeluswa nguwe UWilliam wyler kunye neenkwenkwezi UCharlton Heston, UStephen boyd, UJack hawkins y Haya Harareet, isekwe kwinoveli engaziwayo ngo Uludwe luka Lewis.
Ifilimu iqala kwelakwaYuda ngonyaka wama-XNUMX wexesha lethu. Isidwangube UJudá Ben-Hur utyholwa ngokungekho sikweni ngokuchasa amaRoma waze wagwetywa ngeenqanawa. Emva kokudibana noYesu Kristu kunye nokuhamba kwiindawo ezininzi, umlinganiswa ophambili ufika eRoma njengendoda esisityebi kwaye ikhuphisana kukhuphiswano lweenqwelo. Kodwa unenjongo enye kuphela: ukuziphindezela kumhlobo wakhe wakudala uMesala, onoxanduva lokuvalelwa kukanina nodadewabo.
'UBen-Hur' wayenohlahlo-lwabiwo mali lwezigidi ezilishumi elinesihlanu zeedola, eyona inkulu kwimovie de kube lelo xesha. Abasebenzi abangaphezu kwamakhulu amabini basebenze ekwakhiweni kwemihombiso yayo, ebandakanya amakhulu emifanekiso eqingqiweyo kunye neefriyisi. Ngokukwanjalo, ikhulu labathungi babephethe ukwenza iimpahla. Y indawo yomdyarho weenqwelo Enye yezona zidumileyo kwimbali ye cinema.
Ifilimu ivulwe eNew York ngo-Novemba ka-18, ngo-1959 kwaye yaba yeyona bhanyabhanya yesibini iphambili ngoku emva 'kokuhamba nomoya'. Njengokuba oko akwanelanga, wafumana I-Oscars ezilishumi elinanye, kubandakanya oMfanekiso oBalaseleyo, uMlawuli oGqwesileyo, kunye noGqirha oBalaseleyo. Kuyo nayiphi na imeko, nangoku ingqalelo enye bhanya kakhulu kwimbali cinema.
IPlaza de España, apho kwafotwa khona enye yezona ndawo zidumileyo 'zeholide zaseRoma'
Enye ifilimu ekhokelwa ngu UWilliam wylerNangona inomxholo owahluke kakhulu, ikwayenye yeemovie ukubona ngaphambi kokuya eRoma. Kule meko, ngumdlalo wothando ohlekisayo Audrey Hepburn y UGregory peck. Eyokuqala yile Anna, inkosazana, ethe yakubaleka igqiza layo, yahlala imini nobusuku esixekweni njengaye nawuphi na umRoma.
Yadutyulwa kwizitudiyo ezidumileyo zaseCinecittá, kufutshane kakhulu nekomkhulu lase-Italiya uqobo. Utyunjwe amabhaso asixhenxe esiKolo sezeMfundo, waphumelela ezintathu kubandakanya noMlingisi oGqwesileyo kwiAudrey engalibalekiyo. Kwangokunjalo, izigcawu ezinje ngezi zombini ziphambili kwizinyuko ze ISpain Square okanye ukhenketho lwesithuthuthu luye lwehla kwiimbali zemboniso bhanyabhanya.
'La dolce vita', enye iklasikhi phakathi kweemovie ozibonayo ngaphambi kokuya eRoma
Eyona ndawo idumileyo 'La dolce vita'
Kubhaliwe kwalathiswa ngu UFederico Fellini ngo-1960, kuye kwaqhwatywa izandla ngamxhelo mnye njengenye yeeklasikhi kwimbali yefilimu. Yayiqala kwi-Cannes Film Festival kulo nyaka kwaye yanikwa imbasa Isundu legolide, nangona wayenethamsanqa elincinci kwii-Oscars kuba wafumana eyona yoyilo ilungileyo.
Abalinganiswa bayo baphambili UMarcelo mastroianni, UAnita Ekberg y UAnouk Aimée. Eli yelenqe libalisa amabali aliqela azimeleyo anonxibelelwano oluqhelekileyo sisixeko saseRoma uqobo kunye nokusingqongileyo. Kananjalo kule meko uyakuqonda imeko engalibalekiyo: bobabini abalinganiswa abaphambili bahlamba kwi Umthombo weTrevi.
UNanni Moretti, umlawuli 'wephephandaba elithandekayo'
Umboniso bhanya-bhanya oqhelekileyo apho umlawuli kunye nomlinganiswa ophambili, UNani Moretti, ubalisa ngamava akhe kwisiXeko esingunaPhakade. Inezinto ezintathu ezizimeleyo kwaye idibanisa umdlalo ohlekisayo kunye noxwebhu. Yakhutshwa ngo-1993 kwaye, kunyaka olandelayo, yafumana Isundu legolide e-Cannes kunye nebhaso lomlawuli obalaseleyo.
Zaziwa kakuhle kakhulu yimidlalo apho umlinganiswa ophambili ahamba esixekweni ngasemva kweVespa yakhe echaza izizathu zokuba kutheni ethanda ubumelwane obufana Ibhulorho yaseFlaminio o IGarbatella. Ukuba ufuna ukufumana ulwazi malunga neendawo ezingaziwayo nezisembindini zaseRoma, sicebisa ukuba ubukele le movie.
'Roma, vula isixeko'
Indawo evela 'eRoma, isixeko esivulekileyo'
Ithoni encinci enobubele inale filimu URoberto Rosellini Inkulumbuso ngo-1945. Ibekwe kwiMfazwe yesibini yeHlabathi, isixelela amabali aliqela abo abalinganiswa abaphambili banxulunyaniswa nokumelana namaNazi.
Nangona kunjalo, omnye wabalinganiswa abaphambili ngumbingeleli utata uPietro, ogqiba ukudutyulwa ngamaJamani kwaye ikhutshelwe Luigi morosini, umfundisi owanceda abo bachasayo kwaye wangcungcuthekiswa wabulawa ngenxa yoko.
Ngokukwanjalo, indima ye Iphina, umfazi odlalwa ngu UAna Magnani. Kunye noku, aba baphosi nguAldo Fabrizi, uMarcello Pagliero, uNando Bruno, uHarry Feist kunye noGiovanna Galletti. Yiteyiphu ekrwada kangangokuba inemicimbi yokunyanzelwa. Ukubuyisa, yafumana i Isundu legolide kwiCannes Film Festival.
UMarcelo Mastroianni, inkwenkwezi 'Yosuku oluthile' noSofía Loren
UMarcello mastroianni y USophia Loren Basebenza kunye kwiimuvi ezininzi, kodwa le yeyona nto ibalaseleyo. Isetiwe kwii-XNUMXs, xa i-fascism yayigcwele ngokupheleleyo, kwaye ibonakalisa umfanekiso obalulekileyo woluntu lwase-Italiya ngelo xesha.
UMastroianni udlala umsasazi kanomathotholo ogxothiwe ngenxa yobufanasini kwaye uLoren udlala umfazi otshatileyo kwigosa likarhulumente. Aba babini bangena kubudlelwane xa bedibana ngengozi kuba akukho namnye kubo obeye kumngcelele wokuhlonipha uHitler ngoMeyi 1938, XNUMX.
Umlawuli wefilimu waye Ettore Scola, osebenze neskripthi. Njengomdla, udlala indima exhasayo kwifilimu UAlessandra mussolini, mzukulwana womlawuli wobuzwilakhe. Inikezelwe ngokubanzi, yafumana amagama amabini e-Oscar: umdlali obalaseleyo kunye nefilimu yolwimi lwangaphandle, nangona ekugqibeleni ayizange iphumelele.
URoberto Benigni, omnye wabalinganiswa abaphambili be 'A Roma con amor'
Kutshanje le filimu ikhokelwe ngu Woody Allen, njengoko yayikhutshiwe ngo-2012. Yimidlalo yothando ehlekisayo ebalisa amabali amane onke anesiXeko esingunaPhakade njengesiseko kwaye egxile kumxholo wokuzaliseka komntu kunye nodumo. Omnye wabalinganiswa abaphambili, umvelisi womculo ogama linguJerry, udlalwa nguAllen ngokwakhe.
Abanye nguJack, umfundi wezokwakha odlalwa ngu UJesse Eisenberg; U-Leopoldo, indoda engaziwayo ethi ngesiquphe iba sisinxibelelanisi seendaba kwaye ngubani owenza URoberto Benigni, kunye noAntonio, indima ayidlalayo UAlessandro tiberi. Kunye nabo kuvela uPenelope Cruz, uFabio Armilato, u-Antonio Albanese kunye no-Ornella Muti.
UToni Servillo, inkwenkwezi 'yobuhle obukhulu'
Yangoku neyangaphambili, njengoko yayikhutshiwe ngo-2013, ngaba le filimu yayibhekiswa ngu Paolo Sorrentino, owabhala iskripthi ecaleni kwakhe Umberto Contarello. Kwaye inendawo yokuziphatha.
KwiRoma ehlaselwe yi-ferragosto, intatheli kunye nombhali okhathazekileyo UJep Gambardella Inxulumene nabalinganiswa abohlukeneyo abamele abavela kumanqanaba aphezulu entlalontle. Abafundisi-ntsapho, abezopolitiko, izaphuli-mthetho ezinamakhola amhlophe, abadlali kunye nabanye abantu benza eli yelenqe elenzeka kwizigodlo zobukhazikhazi nakwizindlu ezintle.
Iinkwenkwezi zeemovie UToni Servillo, UCarlo Verdone, USabrina Ferilli, IGalatea ranzi y UCarlo Buccirosso, phakathi kwezinye iitoliki. Ngo-2013 wanikwa imbasa Isundu legolide Cannes kwaye, kungekudala emva koko, kunye UOscar Eyona midlalo bhanyabhanya yolwimi lwangaphandle. Kodwa eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba kukuhlaziya iyelenqe le 'La dolce vita', esele sikuxelele ngalo.
'I-Accatone', umzobo weedolophu
UPier Paolo Pasolini, umlawuli we 'Accatone'
Kuluhlu lwamafilimu ukubona ngaphambi kokuya eRoma akunakuphoswa yenye ikhokelwe ngu UPier Paolo Pasolini, esinye sezifundiswa esasikwazi kakuhle ukubamba isiXeko esiNgunaPhakade, kuyinyani ukuba wahluzwa ngumbono wakhe owahlukileyo.
Singakuxelela malunga neetheyiphu ezininzi, kodwa sikhethe le ngoba ngumzobo weRoma esecaleni. I-Accatone yimpimp evela emadlelweni engayeki ukulamba, njengeqela labahlobo bakhe. Iyakwazi ukwenza nantoni na ngaphambi komsebenzi, iyaqhubeka ixelela kwaye ifumana abafazi abatsha ukuba babaxhaphaze.
Njengoko ubona kweli yelenqe, ngumfanekiso okhohlakeleyo welizwe lamaRoma elingaphantsi kweminyaka yoo-XNUMX. Sela ukusuka I-neorealism yase-Italiya kwaye itolikwa ngu UFranco Citti, USilvana Corsini, UFranca Pasut y UPaola Guidi phakathi kwezinye iitoliki. Njengomdla, siya kukuxelela loo nto UBernardo Bertolucci usebenze njengomncedisi kumlawuli kwifilimu.
Ukuqukumbela, sikubonise ezinye Iimuvi zokuzibona ngaphambi kokuya eRoma. Ziyinxalenye emele bonke abo banesiXeko esingunaPhakade njengeqonga okanye njengomntu ophambili omnye. Ngapha koko, sinokubakhankanya abanye abafana 'Iingelosi needemon'nguGregory Wide; 'Ubusuku becabiria'nguFederico Fellini; 'Intlefull'nguLuchino Visconti okanye 'Yitya Ukuthandaza Uthando'nguRyan Murphy.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » ngokubanzi » Iimuvi ezi-9 zokubukela ngaphambi kokuya eRoma